कमिला र फट्याङ्ग्राले पाए ‘थ्री इन वान’ राहत प्याकेट
कमिला र फट्याङ्ग्राले पाए ‘थ्री इन वान’ राहत प्याकेट ढ्यान्टारानऽऽऽ, स्टेट मिनिस्टरको घोषणा, घाँसेमाटेका कोही भोकै बस्नु पर्दैन, पूरा समाचार छोटो विज्ञापनपछि...
केदार श्रेष्ठ बुधबार, भदौ ३१, २०७७
सुरुमैः ‘कमिला–फट्याङ्ग्रा टकेटिभ’ एक हास्यव्यंग्य आलेख हो । यी दुईको कुराकानी कोही-कसैलाई हजम नभएमा कमिला र फट्याङ्ग्राबाहेक अरू कोही जिम्मेवार हुने छैनन् ।
कमिला र फट्याङ्ग्रा ढिस्कोमा टाक्राक-टुक्रुक्क मौन बसिरहेका थिए । सँगै रहेको रेडियो पनि सुनसान थियो ।
फट्याङ्ग्रा टिठ लाग्दोगरि कमिलालाई हेरिरहेका थिए । तर, कमिला शान्त आँखाले दूरतिर हेरिरहेका थिए । फट्याङ्ग्राले लामो सास तान्दै मौनता तोड्यो ।
‘मेरो त घरमा अब मुस्किलले एकदुई छाक खानेकुरा होला’, फट्याङ्ग्रा पिलपिलाउन थाले, ‘काम गर्न नपा’को नि ६ महिनाभन्दा बढि हुन लागिसक्यो । धन्न ! अहिलेसम्म त जेनतेन खाएकै थियौं । अब चाहिँ के पो गर्ने हो ?’
कमिला अझै चुप थिए । भुईंमा थ्याच्च बसेका उनको हातले भुईं कोट्याइरहेको थियो ।
फट्याङ्ग्राले एउटा ढुङ्गा टिपेर हुत्त फाले । ढिस्कोमुन्तिर खस्याङ्खुसुङ आवाज आयो, तर कमिलाको मुखबाट एक शब्द आवाज निस्किएन । फट्याङ्ग्रा खुइयऽऽ गर्दै उठे, ‘तिमीले त खानेकुरा टन्नै जम्माएका छौ क्यारे, के बोल्थ्यौ त ।’ फट्याङ्ग्रा ढिस्कोबाट सुस्त जम्प मारे ।
‘रेडियो लिएर जाऊ’, कमिलाले आफ्नो मौनता तोडे ।
फट्याङ्ग्राः (ठुस्स परेर) हजुर पनि बोल्नुहुँदो रै’छ त !
कमिलाः बोलेर क्यार्नु छ र ?
फट्याङ्ग्राः के छ तिम्रो दुलोतिर ? भण्डारण राम्रै होला केरे ?
कमिलाः अँ राम्रै छ, अस्ति छेपारोको भुराहरूको रुवाबासी सुनेर बाँकी भा’कोबाट पैंचो दिएँ । अब दुईतीन दिन त राम्रै पुग्ला । बरु बेलुकी तिमी नि हाम्रैमा आऊ, जे-जे छ सँगै खाउँला ।
कमिलाले फट्याङ्ग्राको हातमा रेडियो राखिदिए । फट्याङ्ग्रा शान्त भए ।
फट्याङ्ग्राः (कमिलाको अगाडि आएर, कान समाउँदै) सरी, तिम्रो मन दुखाएँ । (फकाउँदै) बरु जाऔं, छेपारोसँग पैंचो फिर्ता लिन जाऔं ।
कमिलाः भैगो, छेपारोले पनि काँ’बाट ल्याएर दिने हो र ! हिजाको आजै । उनको त परिवार नि ठूलो छ झन् ।
कमिलाको कुरा सुनेर फट्याङ्ग्रालाई के गरूँ, कसो गरूँ भयो । रेडियोको कान निमोठे । रेडियो उही ढ्यान्टारानऽऽऽ पारामा बोल्न थाल्यो ।
‘नमस्कार, रेडियो कोरोनामा भरपूर नमस्कार । समाचार लिएर हाजीर भएको छु तपाईंकै करनकुमार । ढ्यान्टारानऽऽऽ, स्टेट मिनिस्टरले घोषणा गरे, घाँसेमाटेका कोही बासिन्दा भोकै बस्नु पर्दैन । पूरा समाचार छोटो विज्ञापनपछि, ढ्यान्टारानऽऽऽ ।’
यो सुन्नेबित्तिकै कमिला र फट्याङ्ग्रा एक अर्कालाई पुलपुल हेर्दै बसिरहे । दुईतीन पटक आङ तन्काएपछि करनकुमार समाचारमा फर्किए ।
‘स्टेट मिनिस्टरले आजदेखि घाँसेपाटेका बासिन्दाले भोकै बन्न नपर्ने लिखित घोषणा गरेका छन् । भोक लाग्नेबित्तिकै खोल्दा भोक–प्यास चेट हुने राहतको प्याकेट बाँडिदै ।’
सुनेर कमिला दङ्ग पर्‍यो, फट्याङ्ग्रा तीन हातमाथि उफ्र्यो ।
फट्याङ्ग्राः जे भएपनि हाम्रा स्टेट मिनिस्टरले ट्याममा पर्लय रोक्न निर्लय लिन्छन् ।
कमिलाः छेपारोले था पाए कि पाएनन्, उनलाई नि खबर गर्दिनुपर्छ ।
फट्याङ्ग्राः किन था’ हुँदैनथ्यो, छेपारोको कानमै रेडियो ट्याप्प टाँसेको छ त । बरु हामी चाहिँ राहत प्याकेट लिन गैहालम् ।’
भन्दाभन्दै अघिसम्म लोसे न्याउरे फट्याङ्ग्राले त्रिपल जम्प मारिहाले । कमिला पछिपछि लागे । अलि पर पुगेर फट्याङ्ग्राले फर्केर हेरे, कमिला परै देखिए । उल्टी जम्प हानेर कमिला भएकै ठाउँ पुगे ।
फट्याङ्ग्राः तिमी कति लुस्त हिँडेको । उता राहत प्याकेट सक्याइसक्छन् फेरि । ल मेरो बुई चढ । अलि रामरी समाऊ, म तुफान एक्सप्रेसको पारामा जम्पिने हो ।
कमिला फट्याङ्ग्राको बुइ चढे । फट्याङ्ग्राको जिउमा च्याप्प समाते । फट्याङ्ग्राले न्वारनदेखिको एक्सिलेटर दबाएर रेस लिए ।
उता घोषणा भुईंमा खस्न नपाउँदै स्टेट मिनिस्टरका परमनाथजीहरूले घोषित राहत प्याकेट बाँड्न थालिसकेका थिए । घाँसेपाटेका बासिन्दाको तीन–चार लाइन बनिसकेको थियो । त्योभन्दा बढि ट्युबे पत्रकारहरूको भीड थियो ।
महिनौंदेखि दुलो पसेका बासिन्दाहरूलाई राहत प्याकेटसँग डिस्ट्यान्स मेन्टेन गर्न हम्मेहम्मे भइरहेको थियो । परमनाथजीहरूले प्रफुल्ल मुद्रामा प्रतिबासिन्दा एक–एक प्याकेट बाँडिरहेका थिए ।
प्याकेट हातमा राखिदिँदै प्रत्येकलाई भन्दै थिए, ‘अँ बेस्सरी भोक लागेपछि मात्र प्योकट खोल्नू, खोल्ने बित्तिकै भोक चेट । भोक–प्यास मात्र हैन, निद्रा नि चेट । थ्री इन वान प्याकेट हो यो ।’
फट्याङ्ग्राः ल हेर मैले जम्प नमार्‍या भए त दसौं लाइनतिर पर्ने रहेछ । (फुरुङ्ग परेर) धन्न पाँचौ लाइनको पहिलो र दोस्रोमै हामी भयौं ।
टन्टलापुर घाममा टट्टेर लाइन बस्दा सबैको ओठ–तालु सुकिसकेको थियो । लाइनले नम्बर १० कटिसकेको थियो । बल्लबल्ल पाँचौ लाइनको पालो आयो । फट्याङ्ग्रा र कमिलाले सुरुमै प्याकेट पाए । परमनाथजीहरूले भन्न मात्र लागेका थिए, फट्याङ्ग्रा आफैं बोलिहाले ।
फट्याङ्ग्राः अँ, था’छ, था’छ । बेस्सरी भोक लागेपछि मात्र प्योकट खोल्ने, खोल्ने बित्तिकै भोक चेट । भोक–प्यास मात्र हैन, निद्रा नि चेट ।
कमिलाः अँ, थ्री इन वान प्याकेट !
दिनभरिको थकाइले बिस्तारै साँझपख मात्र बासस्थान पुगे । लखतरान परेका उनीहरू थच्च बसे ।
कमिलाः (खुइय गर्दै) एक छाकको लागि यत्रो सास्ती । ल, आज मेरो प्योकट खोलौं, भोलि तिम्रो खोलौंला, हुन्न ?
फट्याङ्ग्राः (पेट मुसार्दैै) जुन जहिले खोले नि मलाई त बेस्सरी नै भोक लाग्यो । अब प्याकेट खोल्दा हुन्छ होला ।
कमिलाः अँ खोलम् न त । मलाई पनि भोक र प्यासले प्याक–प्याक बनाइसक्यो ।
(कमिलाले प्याकेट खोल्न थाल्छन् । फट्याङ्ग्रा नचलमलाइ एकटकले हेर्छन् ।)
फट्याङ्ग्राः (उत्सुक हुँदै) के पो होला हौ, खोल्नेबित्तिकै भोक–प्यास चेट हुने ?
कमिलाः खोल्दैछु त, एकछिन धैर्य गर न ।
कमिलाले प्याकेटलाई पोको पारेको कागज खोले । तर अचम्म, अर्को कागजले फेरि कभर गरेको थियो । त्यो पनि खोले, फेरि अर्को कागजको पोको निस्कियो । उता फट्याङ्ग्रा भोक–प्यास थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । पोको फुत्त ताने ।
फट्याङ्ग्राः ह्या, तिमी कत्ति ढिलो गर्छौ के ? म खोल्छु छोड, आफूलाई भोकले मार्न लागिसक्यो ।
प्याकेट फटाफट खोल्न थाल्छ । त्यस्तै १० वटा कागजको कभर खोलेपछि एउटा सेतो कागज रोल गरेको भेट्यो । यत्रो खोल्दा पनि भोक–प्यास नमेटिएपछि दुवै पेट मिचिरहेका थिए । दुवैले दुवैलाई पुलुक्क हेरे । बिस्तारै कमिला फट्याङ्ग्राले त्यो कागजको रोल खोले । कागजमा सुनौलो रङ्गले लेखिएको थियो– स्टेट मिनिस्टरको भोक चेट पार्ने महान कविता ...
अरू पनि थुप्रै लाइन थियो । टिलिक्क सुनौलो अक्षरको ज्योतिले कमिला र फट्याङ्ग्राको आँखा तिरमिरायो । अरू हरफहरू ठम्याउन सकेनन् ।
फट्याङ्ग्राले काँधमा रहेको रेडियोमा रिस पोख्यो र हुत्त फाल्यो । रेडियो टिईंऽऽऽ गर्न थाल्यो, झ्याप्पै बोल्यो, ‘ढ्यान्ट्यारानऽऽऽ । घाँसेमाटेका स्टेट मिनिस्टरका कवितामा परमनाथजीले संगीत भरेर बनेको गीत, सुन्नुहोस् महान गीत... ।’
रेडियोमा गीत बज्न थाल्यो । लखतरान कमिला र फट्याङ्ग्राको कान पनि टिनिँनीँऽऽऽ बज्न थाल्यो ।
कमिला–फट्याङ्ग्रा टकेटिभको अरु श्रृंखला पनि पढ्नुहोस्
विनोद चौधरीलाई कोरोना लागेपछि कमिला र फट्याङ्ग्राको गलफती- टकेटिभ १
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३१, २०७७ १८:३०
आइतबार, साउन १७, २०७८ १७:४८ मिमी : सपना, भाडाको कोख अनि त्यसपछिका अवयवहरु
मंगलबार, साउन १२, २०७८ १०:४० वैकल्पिक राजनीतिको नाउँमा रवीन्द्र मिश्रको भद्दा मजाक
आइतबार, साउन १०, २०७८ १७:०९ किन ‘ब्याकफुट’मा गए गगन थापा ? मन्त्री बन्ने लोभ वा अर्कै छ कारण ?
शुक्रबार, साउन ८, २०७८ १७:४४ समाजलाई चाहिने विकासको भविष्य आफैँले बनाउन जरुरी छ
सोमबार, साउन ४, २०७८ १०:२३ भीम रावलको राजीनामाको अन्तर्य
आइतबार, साउन ३, २०७८ १५:५४ ‘अहंकारी ओली’ र ‘मुर्ख नेपालका’का कारण ‘अक्षम’को हातमा मुलुकको बागडोर